Shirka Golaha Wakiilada Shacabka iyo Golaha Federeshinka Oo Furmay - Cakaara News
Shirka Golaha Wakiilada Shacabka iyo Golaha Federeshinka Oo Furmay
Addis-Ababa(CN) Isniin, 5tii October 2015, Madaxwaynaha jamhuuriyada Dimoqraadiga federalka itoobiya mudane Dr. Mulatu Tashome ayaa galabta furay shirka golaha wakiilada shacabka.
Shirkan oo uu hogaaminayay qaybta hore madaxwaynaha dalku ayaa iyadoo qoodbada dastuurka laraacayo waxaa mar labaad codbuuxa lagu doortay mudane Abadula Gemeda inuu noqdo afhayeenka golaha wakiilada shacabka 5ta sano ee soo socota maadaama oo uu muujiyay shaqo wanaag 5tii sano ee lasoo dhaafay. isagoo afhayeenka halkaas lagu dhaariyay.
Kadibna, afhayeenka oo hogaaminta shirka qabtay ayaa guriga usoo jeediyay inay si xor ah ugu doortaan codkooda cidii noqon lahnayd afhayeen kuxigeenka golaha wakiilada shacabka. halkaas oo gurigu cod buuxa ugu doortay marwo Shitaye Minale inay mar labaad noqoto afhayeen kuxigeenka dalka laguna dhaariyay.
Sidoo kale, ayuu afhayeenku guriga usoo jeediyay inay doortaan raisal wasaarihii wadanka hogaamin lahaa 5ta sano ee soo socota. Wuxuuna gurigu cod aan loo kala hadhin ku doortay mudane Hailemariam Dessaleign inuu noqdo Raisal wasaaraha Wadanka hogaaminya 5ta sano ee socota.
Ugudanbayna, shirka golaha wakiilada shacabka dalka oo ay soo galeen golaha federeshinku ayaa waxaa khudbad khusaysa qorshaha 5ta sano ee soo socota kajeediyay madaxwaynaha JDFI mudane Dr. Mulatu Tashome.